ShareNke a bụ 50% nke Nnukwu Ngwa | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 31, 2009 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Mgbe ole ShareThis malitere, enwere m obi ụtọ iwepụ ndepụta nke akara ngosi viral nke m nwere na saịtị ahụ wee jiri otu bọtịnụ dị mfe dochie ya. Nsogbu a bụ na bọtịnụ ahụ abụrụla nhụjuanya na blọọgụ m. Na ederede nke nwere ọtụtụ narị nnabata na ọtụtụ puku ekwuru gafee saịtị mgbasa ozi mmekọrịta, e jiri ShareThis mee ihe ugboro iri!
Nsogbu dị na ShareThis bụ na ọ bụ odighi nfe maka onye na-agụ ya.
Ka anyị kwuo, dịka ọmụmaatụ, onye na-agụ chọrọ ịkọ akụkọ ha chọtara na Twitter.
Ha na-ejikọ njikọ ShareThis a.
Ha ga-pịa Twitter.
Ha ga-enye nbanye.
Ha kwesiri inye okwuntughe
Ha ga-pịa post.
Ọtụtụ nzọụkwụ. Ọtụtụ nzọụkwụ.
M na-ekwu na ShareThis bụ 50% n'ihi na ha na-etinye uche dị ukwuu na ahụmịhe onye nkwusa na ezughị ezu na ahụmịhe ndị ọrụ. Nke a nwere ikike ịbụ ezigbo ngwa ma ọ bụrụ na ha emee otu ihe - mee ka ọ dịrị m mfe ịkekọrịta.
Igbe mbata bụ nnukwu mgbakwunye mgbakwunye - ndị ọrụ nwere ike ịlele ihe ha kesara. Ma, ezughị.
Dị ka onye ọrụ, m ga-enwe ike nbanye ShareThis ozugbo ma melite netwọk mmekọrịta m ozugbo. Mgbe m gara na weebụsaịtị ọzọ… Ekwesịrị m ịbanye n'ime ShareThis ka m wee nwee ike pịa bọtịnụ iji nyefee ya na Twitter, Facebook, ma ọ bụ netwọk ọzọ (dị ka Tweetmeme eme maka Twitter). Anaghị egbu osisi na filling enweghị juputara na nkọwa (belụsọ na ha chọrọ)… naanị ịkekọrịta!
M na-atụ anya ịhụ otú ShareThis si agbanwe na 2010. Ana m edebe ya ebe a na blọọgụ n'ihi na ọ na-enye ụfọdụ uru. Enwere ike dị ukwuu, ọtụtụ karịa na.